Anjali G - Incredible Mag - Pejy 3
Fomba 5 tsara handanianao ny fotoanao eny amoron-dranomasina
Ny iray amin'ireo fifaliana amin'ny lohataona sy fahavaratra dia ny mandeha mankany amoron-dranomasina. Afaka mandany ora maro amin'ny filomanosana na hilentika amin'ny masoandro ianao. Na izany aza, betsaka ny zavatra tokony hatao eny amoron-dranomasina noho ny milomano na miala sasatra amin'ny seza amoron-dranomasina.…
Fantaro ireo zava-misy lehibe momba ny Tel Aviv Berdichevsky
Ny zavatra voalohany sy lehibe indrindra, mila ataonao mandritra ny fitsidihanao ao Tel Aviv dia ny mahita hotely mety ary hahafahanao miditra amin'ireo toerana fizahan-tany rehetra amin'ny mora be. Ity dia afaka manaporofo fa asa sarotra ho an'ny rehetra…
Zava-dehibe 5 hatao any Delhi mandritra ny fitsidihanao amin'ity fahavaratra ity
Ny renivohitra India dia iray amin'ireo tsara indrindra nananan'ny firenena iray manontolo. Izy io dia manana ny zava-drehetra manomboka amin'ny teboka manan-tantara malaza indrindra ka hatramin'ny fahagagana nataon'ny olombelona indrindra. Betsaka ny vola tokony hatao raha te hahita izy ireo…
Ahoana no fomba hanararaotana ny fotoana betsaka indrindra any Koh Lanta
Koh Lanta dia gadona nosy madio sy madio ao amin'ny ranomasina Andaman, eo akaikin'ny morontsiraka atsimon'ny Thailandy any amin'ny faritanin'i Krabi. Ny antsoina hoe Koh Lanta dia nosy roa samy hafa - Koh Lanta Noi sy Koh Lanta Yai. Ny hetsika fizahan-tany dia…
Toeran'ny mpizahatany any India Avaratra Atsinanana - Fangaroana fahanginana sy hatsarana
Ireo rahavavy 7, izay manao ny Avaratra Atsinanana India dia sombin'ny paradisa indiana miandry hisokatra. Misy ny toerana mahafinaritra indrindra any amin'ny fanjakana izay manintona sy manintona. Ny velaran-tanety, havoana, zavamaniry ary zavamaniry, renirano ary renirano…
Asia/Holidays/Travel Guides/Hevitra fitsangatsanganana
Fivahinianana masina ho an'ny tontolo iainana mahavariana ao amin'ny Tempoly volamena
Raha reraka amin'ny fihenjanana isan'andro ianao, dia manaova drafitra fitsangatsanganana any amin'ny Tempolin'i Golden Amritsar. Tanin'ny fandriam-pahalemana sy filaminana, ny Tempoly volamena dia tsy fivahiniana masina ho an'ny Sikh ihany fa ho an'izay te-handany fotoana kely ao…
Asia/Travel Guides/Hevitra fitsangatsanganana
Fiaraha-miasa lehibe azonao atao ao amin'ny Chandni Chowk
Raha mitsidika an'i Delhi ianao dia tsy ho diso anjara amin'ny fiantsenana kely fotsiny. Misy toerana maro manerana an'i Delhi izay fijanonana tsara indrindra amin'ny dia fitsangatsanganana sasany. I Delhi dia tanàna iray ahafahanao mitsangantsangana matetika, saingy…
Toeran-kaleha iraisam-pirenena momba ny teti-bolam-be 5 avy any India
Mikasa hanao fialantsasatra nefa mbola tsy nanapa-kevitra ny amin'izay haleha? Ahoana raha lazainay aminao fa ny teti-bola natokanao ho an'ny fialantsasatrao dia mihoatra noho ny ampy ny fitsangatsanganana any ivelany. Toa tsara loatra ve ka tsy marina? Inty, ireto ny ambony…
Toerana mahatalanjona 3 avy any Lucknow azonao zahana amin'ny dia manan-tantara
Febroary 22, 2016
Ny renivohitra Uttar Pradesh, Lucknow, dia fantatra ho iray amin'ireo tanàna lehibe indrindra amin'ny faritra avaratry ny firenena. Ilay tanàna fantatra amin'ny tantaram-piainany lalim-paka sy ny maha-zava-dehibe ny kolontsaina dia fantatra amin'ny anarana hoe "City of Nawabs". Lucknow indray mandeha…
Cochin - Toerana 5 be mpitady indrindra mandritra ny dianao mankany an-tanàna
Febroary 14, 2016
Iray amin'ireo tanàn-dehibe any Kerala, tanànan'ny Cochin, mahita mpizahatany iraisam-pirenena marobe isan-taona noho ny seranam-piaramanidiny iraisam-pirenena. Betsaka ny tranonkala azo zahana eto an-tanàna ary mandany dia lavitra ny fandanianao dia lavitra…